အရွယ်အစား ကြီးမားသည့် ဖိုင်များကို သေးငယ်သည့် ဖိုင်များအဖြစ် ချုံ့ခြင်း ~ လမင်းမောင်နည်းပညာ
ဖုန်း Root and Myanmar fonts
12:54 AM Computer Software No comments
VIVO Y22 ကို ROOT လုပ်ချင်သူများအတွက်
VIVO Y22 ကို Root လုပ်ချင်သူတွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ VIVO တော်တော်များများပာာ One Click Root Tool တွေနဲ့မပေါက်တာမျ...
Huawei C8817D ( Honor Play4) အတွက် Official Firmware B267
Huawei C8817D ( Honor Play4) အတွက် Official Firmware လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ်။ Buildnumber 267 နဲ့ ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပါ...
Honor G620s-UL00 ကို Root လုပ်ချင်လို့မေးထားသူတွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အခြား Buildnumber များမှာတော့မရနိုင်ပါ။ Build...
Money Test & Time service error ကို apk နဲ့ ဖြည်ရှင်းချင်သူများအတွက်
Money Test & Time service error ကို ဖြည်ရှင်းဖို့ ကျတော် bat file လေးတစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်။ bat file ဆိုတော့အားလုံးသိကြတဲ့အ...
Total SMS apk တောင်းထားတဲ့အကိုအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ application လေးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကတော့ ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်ယေ...
ဖုန်းအားလုံးကိုသိစေမယ့် Universal ADB Driver
ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ဘာပဲလုပ်ချင်လုပ်ချင် ဖုန်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာ Driver Software ကိုကွန်ပျူတာ မှာသွင်းထားမှသာ ကွန်ပျူတာကဖုန်းကို...
HTC Desire 620 / 620h / 620g တို့အတွက် Official Firmwares ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်လို့တောင်းထားတဲ့အကိုနဲ့အတူ အခြားလိုအပ်နေသူများလဲ ရယူလ...
Samsung Galaxy E7 ( Sm-E700H ) ကို version 4.4.4 မှာ ROOT လုပ်ပြီး CoC မှာ မြန်မာစာသုံးချင်လို့တောင်းဆိုထားတဲ့အကိုအတွက် ROOT လုပ်...
ဒီ​ဆော့ဝဲ​လေးက​တော့ Android Version 4.4.4 အထိ မြန်​မာစာ မှန်​မှန်​နဲ့ အချို့ဖုန်း​တွေဆို System Myanmar Font ​တောင်​သွင်းလို...
အခုခေတ်စားနေတဲ့ monkey test နဲ့ time service virus ရှင်းနည်း
ရေးသားသူ – Soe Han Htun (Myanmar Mobile User Group) One click solution တွေ ထွက်လာပေမယ့် ရာနှုန်းပြည့် မရှင်းနိုင်ကြသေးတာကို ...
Root and Myanmar fonts
Driver Booster(V-2.3.1.1)Latest Version For Pc
ဘာလို့ သင့်ဖုန်းကို လေယာဉ်မှာ ပါဝါ ပိတ်ခိုင်းသလဲ
Accessibility setting ထဲက TalkBack မိနေရင် ဘယ်လြို...
Lock ကျသွားတဲ့ Facebook အကောင့် ပြန်ယူနည်း
စတင်တည်ဆောက်သည် © 26.6.2015 လမင်းမောင်နည်းပညာ | Powered by Blogger
Design by လမင်းမောင် | Blogger Theme by လမင်းမောင် - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons